Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo Agab waxbarasho gudoonsiisay Ardayda Dufcada labaad ee Deeqda Waxbarasho - Home somali news leader
Home NEWS Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo Agab waxbarasho gudoonsiisay Ardayda Dufcada labaad ee...
Hay’adda Hormuud Salaam Foundation oo Agab waxbarasho gudoonsiisay Ardayda Dufcada labaad ee Deeqda Waxbarasho
Munaasabada ardayda lagu gudoonsiinayay Agabkan oo ah laptop-yo loogu tala galay ardayda fursada u heshay Barnamijka deeqda Waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation ayaa lagu qabtay Xarunta Hey’adda Hormuud Salaam Foundation ee magaalada Muqdisho.
Illaa iyo soddon arday oo wax ka barta 11 jaamacadood ee dalka ayaa nasiib u helay in la siiyo agabkan oo ay bixisay hay’ada Hormuud Salaam Foundation.
Guddoomiye Ku xigeenka Hormuud Salaam Foundation Cabdiraxman Ibrahim Cilmi oo ugu horeen ka hadlay munaasabada ardayda lagu gudoonsiinayay agabka waxbarasho ayaa kahadlay deeqda waxbarasho oo ay hormuud siisay Ardayda maanta lagudoonsiiyay laptop-yada.
Cabdullaahi Nuur Cismaan Gudoomiyaha Hay’adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegay in deeqda waxbarasho loogu talagalay in loo soo saaro dadkii dalkan mustaqbalka wax u tari lahaa, waxaana uu kula dardaarmay ardayda in waqtigooda iyo nasiibkooda ay ka faa’iideestaan oo ay ka natiija keenaan waxbarashadooda islamarkaana ay dib u milicsadaan juhdiga waalidiintooda ay ku soo bixiyeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay sameyn doonaan wacyi galin iyo tababaro xiliyada fasaxa ardayda taasi oo looga faa’ideenaayo ardayda in sare loogu qaado garaadkooda, isagoo hoosta ka xariiqay in howlaha Hay’ada hormuud Salaam Foundation ay sal u yihiin Hormarinta Dalka.
Qaar kamid ah waalidiinta iyo ardaydii heshay agabka waxbarasho ayaa ka mahad celiyay fursadaan ay siisay Hay’ada Hormuud Salaam Foundation iyagoo tilmaamay in ay dhameystirantahay habsami usocodka waxbarashadooda.
Waa sanadkii labaad oo Hay’ada Hormuud Salaam Foundation ay siiso deeq waxbarasho iyo agab noocan oo kala ah iyadoo sanadii 2019 ilaa 30 arday ay ka faa’ideysteen.
Qalab la guddoonsiiyay arday ay deeq waxbarasho siisay shirkada salaama hormuud
Previous articleChinese lunar capsule returns to Earth with first rock samples in 44 years
Next articleMusharaxiinta Madaxweynaha oo ku tilmaamay daan-daansi dagaal Ciidamada la dul dhigay hoygooda